सेनाले ७ हेलिकोप्टर किन किन्ने, कहाँबाट कति खरिद ? « Naya Page
सेनाले ७ हेलिकोप्टर किन किन्ने, कहाँबाट कति खरिद ?
काठमाडौं : सरकारले नेपाली सेनाका लागि ७ वटा हेलिकप्टर तथा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ। विपत् व्यवस्थापन, हवाई सैनिक तालिम, भीभीआइपी उडान, कार्गोलगायत प्रयोजनका लागि सेनाले साना ठूला गरी ७ वटा सैन्य विमान तथा जहाज खरिद अनुमति पाएको हो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
सरकारले एउटै आर्थिक बर्षमा यतिधेरै जहाज खरिद गर्न लागेको पहिलो पटक हो । सैनिक मुख्यालयले थप २ वटा एम आई १७ हेलिकप्टर खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । यी सबै हेलिकप्टर तथा जहाज सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट किन्न लागिएको सेनाले जनाएको छ ।
कहाँबाट कति खरिद ? इटालियनः २ (१४ सिट) इन्डोनेसियाः २ (ट्रेनर जहाज) फ्रान्सः १ (फिक्स्ड विङर कार्गो) अमेरिकाः बेल (६ सिट र इकुरेल ९४ सिट)
कहाँबाट कति खरिद ?
फ्रान्सः १ (फिक्स्ड विङर कार्गो)
अमेरिकाः बेल (६ सिट र इकुरेल ९४ सिट)